ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်၊ ထိန်းချုပ်သေတ္တာ ထုတ်လုပ်သူများ - တရုတ် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ စစ်ဆင်ရေး၊ ထိန်းချုပ်ဘောက်စ် ပေးသွင်းသူများနှင့် စက်ရုံ၊
ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မီးအိမ်များနှင့် မီးအိမ်များ
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော LED မီးချောင်းများ
အခြားသော ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ မီးချောင်းများ
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်၊ ထိန်းချုပ်မှုသေတ္တာ
ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော Circuit Breaker
ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
ပေါက်ကွဲခြင်းနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ မီးအိမ်များ
ပေါက်ကွဲမှုနှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ ပလပ်နှင့် ပလပ်ပေါက် ကိရိယာ
ရေနှင့် ဖုန်မှုန့်နှင့် သံချေးတက်သည့် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ
ရေနှင့် ဖုန်မှုန့်နှင့် တိုက်စားမှုဒဏ်ခံ မီးအိမ်များ
BAD63-A စီးရီး Explosion-pr...
FCT93 စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်း အကာအကွယ်...
FCD63 စီးရီး ပေါက်ကွဲခြင်း အကာအကွယ်...
BF28158-g စီးရီး ပေါက်ကွဲမှု ဒဏ်ခံ စစ်ဆင်ရေး ပို့စ်
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ သန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း၊ ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်း၊ ရေနံတင်သင်္ဘော စသည်တို့ကဲ့သို့ မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။ ၎င်းကို စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း၊ ဆိပ်ကမ်း၊ စပါးသိုလှောင်မှုနှင့် သတ္တုများကဲ့သို့ မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်နေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုပါသည်။ လုပ်ဆောင်နေသည်;
2. ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်၏ ဇုန် 1 နှင့် ဇုန်2တွင် သက်ဆိုင်သည်။
3. IIA၊ IIB၊ IIC ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
4. မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်ပတ်ဝန်းကျင် 21 နှင့် 22 ဧရိယာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
5. အဆိပ်သင့်ဓာတ်ငွေ့များ၊ အစိုဓာတ်နှင့် မြင့်မားသော အကာအကွယ်လိုအပ်ချက်များ နေရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
6. အပူချိန်အုပ်စုတွင်သက်ဆိုင်သည် T1 ~ T4;
7. ထိန်းချုပ်ထားသော မော်တာအနီးတစ်ဝိုက်ရှိ မော်တာအား အဝေးမှ သို့မဟုတ် သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်စေ လျှပ်စစ်သံလိုက်ကိရိယာကို ထိန်းချုပ်ပြီး လျှပ်စစ်ကိရိယာနှင့် အချက်ပြမီးမှတစ်ဆင့် ထိန်းချုပ်ထားသော ဆားကစ်၏လည်ပတ်မှုကို စောင့်ကြည့်လေ့လာပါ။
LBZ-10S စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ စစ်ဆင်ရေးပို့စ်
5. အပူချိန်အုပ်စုတွင်သက်ဆိုင်သည် T1 ~ T4 / T5 / T6;
6. အမိန့်ပေး ပို့လွှတ်ခြင်းနှင့် အခြေအနေ စောင့်ကြည့်ခြင်း တစ်ခုတည်းအတွက်သာ လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။
LBZ-10 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ စစ်ဆင်ရေးပို့စ်
6. စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်ပြမှုများကို ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းရှိ လျှပ်စစ်အချက်ပြများအဖြစ် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက် ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲပါ။
dLXK စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ခရီးသွားခလုတ်
SW-10 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ အလင်းရောင် ခလုတ်
6. မီးချောင်းများ သို့မဟုတ် အသေးစားလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအတွက် ထိန်းချုပ်ခလုတ်တစ်ခုအနေဖြင့် တပ်ဆင်သည့်အခါတွင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှု ရှိသင့်သည်။
BF28158-g စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ထိန်းချုပ်ရေးသေတ္တာ
6. အပူချိန်အုပ်စုတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်မှာ T1 ~ T6;
BXK58 စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ထိန်းချုပ်ရေးသေတ္တာ
6. အမိန့်ပေး ပေးပို့ခြင်းနှင့် အခြေအနေကို စောင့်ကြည့်ခြင်းအတွက် လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် အသုံးပြုသည်။
XN စီးရီး မီးဘေးကာကွယ်ရေးအတွက် ပေါက်ကွဲခြင်း-ခံနိုင်သော အချက်ပေးခလုတ်
6. မီးဘေးကာကွယ်ရေးကို စောင့်ကြည့်ပြီး စီမံခန့်ခွဲသည့်နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်။
LA53 စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော ထိန်းချုပ်ခလုတ်
6. လျှပ်စစ်ထိန်းချုပ်မှုစနစ်များတွင် စတင်အသုံးပြုသည်၊ Relay များနှင့် အခြားလျှပ်စစ်ဆားကစ်များကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
အမှတ် 388၊ Guodao လမ်း၊ Qixing မြို့၊ Nanhu ခရိုင်၊ Jiaxing မြို့